Ukuchonga umkhondo weGPS okhokelela kuMntu oKhubazekileyo | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Xa unomntwana okhethekileyo, lixesha elifanelekileyo lokucinga ngokujonga amanyathelo okhuseleko ongezelelweyo ukumkhusela ngamaxesha onke. Kungenxa yoko le nto namhlanje ndiza kuthetha malunga ne-tracker ye-GPS yenye yezona ndlela onokuthi ukhethe xa uza kujonga imisebenzi yabantwana bakho.
Kungenxa yokuba enkosi kwezi ndawo unokufumana abantwana bakho ngokulula xa belahleka. Oku kuya kukunika uxolo lwengqondo ngakumbi ngalo lonke ixesha kuba uya kwazi ngokuthe ngqo apho bakhoyo abantwana bakho.
Kutheni kufuneka ndithenge i-GPS Tracker?
Ukukhuseleka kwabantwana abancinci kuhlala kuyinto ephambili kubazali, kwaye xa unabantwana abancinci akufuneki uwathathe kakubi amanyathelo ongawathatha. Abantwana banokulahleka ngokulula naphina, ke, kuyafuneka ukuba ubanakho.
I-iHelp 3G / 4G i-GPS yokulandelela i-Wristband, i-Keychain (i-OMGGPS40D)
Ndiyabulela umkhondo we-GPS wabantwana, uya kuyazi ngokuthe ngqo ukuba umntwana wakho uphi, kwaye ngexesha likaxakeka, uya kuba nenketho yokuyifumana. Kukwakhona abahlali abanayo i-QR, eya kuvumela nabani na ukuba afumane umntwana wakho ukuba akwazi ukunxibelelana nawe.
Uxolo lwengqondo lokwazi ukuba umntwana wakho ukuphi ngalo lonke ixesha uxabisekile. Kuthekani ngokufumana umyalezo xa ndifika esikolweni? Kwaye isilumkiso ukuba ushiya indlela yakho eqhelekileyo? Ngendawo yokufumana abantwana, uya kuyifumana.
Abantwana banamhlanje abanakonwabela inkululeko efanayo naleyo besinayo kwizukulwana ezidlulileyo kodwa banetekhnoloji yakutshanje yokubanceda.
Ngombulelo kubahlali bomntwana asinokwazi kuphela apho akhoyo kodwa sinxibelelane naye. Ezinye iimodeli zikuvumela ukuba wenze umnxeba wokulumkisa ukuba kwenzeka nayiphi na imishap kunye nezinye izinto ezininzi esizixelela zona ngezantsi.
Ukumvumela ukuba aye kwiindawo ezithile yedwa ngaphandle kokuhamba naye rhoqo kuya kukhulisa ukuzimela ngakumbi kunye nokuzithemba kuye.
Umntwana wakho makonwabele ukuba ngumntwana kunye nokhuseleko lokwazi ukuba akanakuze abe yedwa.
Kutheni ndifanele ndisebenzise umkhondo womntwana ngomntwana wam?
Uya yedwa esikolweni
Bakhula ngokukhawuleza kakhulu kwaye kulo nyaka ufuna ukuya esikolweni yedwa. Awunokumlandela yonke imihla emva kweekona ngokungathi uyintlola. Ufuna inkululeko kunye nokhuseleko lokwazi ukuba akayishiyanga indlela yakhe. Beka indawo yokuhlala yomntwana kwibhegi yakho okanye ibhanti lakho.
Isitshixo esincinci kwaye ayisekho ngakwicala lethu. Kwivenkile enkulu, ethekweni okanye nakweyiphi na into yokubambana ungasivumela isandla sethu ukuba soyike. Mbize ngewotshi yakhe yabantwana kwaye uve ilizwi lakho liya kuzola de ube ukunye naye kwaye yonke into iya kuba yoyikisa.
Ukhuseleko ngaphambi kwayo yonke into
Udlala ngokuthula kwi-swings, sajonga ifowuni yexesha elincinci kunye nokujika okusinika intliziyo xa sijonga phezulu kwaye akusekho kwindawo enye. Jonga kwiselfowuni yakho ukuba uphi na okanye wafumana isaziso kumntwana wakho esihlala naye xa umgama othile ususwa kude.
Kuzo zonke ezi meko kubalulekile ukuba ubeke kwindawo ekhethekileyo yomntwana kwindawo yakho yokubambisa, ibhanti… okanye iwotshi kwisandla somntwana wethu. Kukwasisiqinisekiso sokuba nayiphi na impazamo iya kuba nesiphelo esonwabisayo nesikhawulezayo sokunciphisa ixesha lokukhangela.
Nangona ungekho nakwezinye iimeko ezingasentla kufuneka uqwalasele ukhetho lokukhusela abancinci endlwini njengento nje yokulumkisa. Ngamanye amaxesha, isiphazamiso esincinci sinokusikhokelela ekubeni sibe novalo olukhulu ngaphandle kwayo yonke inkathalo esiyibeka kuyo.
Kodwa yintoni kanye kanye kwaye basebenza njani abantwana bendawo?
Indawo yokuhlala yomntwana sisixhobo esincinci esinga fakwa ibhegi yomntwana okanye iimpahla. Ngamanye amaxesha akuyimfuneko okanye ukuba uyazi ukuba yintoni injongo yakho. Inokuba iwotshi, umsesane weqhosha okanye ipendant. Ezi zixhobo zisazisa ukuba umntwana uhamba kude nathi. Kananjalo ukuba ushiya indawo emiselweyo njengekhuselekileyo. Bakwazisa ngesimo sakho ngamaxesha onke. Kwaye konke ngokusebenzisa usetyenziso lweselula.
Ezinye iimodeli ezinobunkunkqele beendawo zabantwana ziyavumela ukuba singene kwingxoxo nomntwana wethu okanye simfowunele.
Kuxhomekeke kubuchwephesha kunye nokusebenza sinokufumana izixhobo ezithembekileyo kunabanye. Sinokuba nomdla kububanzi obubanzi okanye ukuba bane-GPS okanye hayi. Kuyathakazelisa ukujonga ukuba basebenzisa i-GPS / LBS. Abanye bafuna ubhaliso ukufikelela kwiinkonzo zabo kwaye abanye abenzi.
Yintoni endifanele ndiyiqwalasele ukukhetha indawo eyiyeyona ilungele abantwana?
Ukulandelelwa kwe-GPS kunokuba luncedo kakhulu kodwa akusoloko kuyilo teknoloji efanelekileyo ukulawula umntwana.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zabantwana zokufumana indawo kwaye nganye eyilelwe ukusetyenziswa okuthile kunye nesisombululo. Izidingo ziyahluka ngokuxhomekeka kubudala bomntwana, umgama asebenza kuwo, kunye nohlobo loqwalaselo ...
Beka yonke imbonakalo kwindawo enye, ngale ndlela, unokuthatha isigqibo ngokujonga ukuba yeyiphi imodeli yabona ndawo yabantwana elungele iimfuno zakho kwaye yeyiphi engafanelekanga. Kwaye ukhethe ngokulula okona kulungele umntwana wakho phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeentengiso kunye neetekhnoloji.
4913 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-27 Namhlanje